I-Q & A Session ye-God Of High School yoMqondisi! - Okunye
Umqondisi We-God Of High School Uphendula Imibuzo Engu-20 Enkampanini YakwaMecha!
Ipaki yeSunghoo ungumqondisi waseNingizimu Korea weThe God Of High School. I-anime eyenza okungaphezu nje kokudlula okulindelwe.
Njengengxenye yokubambisana kweNkampani kaMecha neCrunchyroll, sine-Q & A nomqondisi lapho ephendula khona imibuzo engama-20.
Nalu uhlu lwazo zonke izimpendulo zakhe kulesi sikhathi se-Q & A!
1. Ucabanga ukuthi yini eyenza uNkulunkulu wesikole samabanga aphezulu abe uchungechunge olukhulu lwamahlaya ukuze aphenduke i-anime?
Kuyisikhathi sokuqala kimi ukudala i-anime ngokususelwa kumakhomikhi aseKorea, okuyizwe lami, ngakho-ke ngijabule kakhulu ngakho.
2. Ngabe ucabanga ukuthi inesikhalazo esivamile (isb. Ngaphezu kwabalandeli be-anime) futhi uma kunjalo, ngani?
Ingqikithi yendaba yoqobo ingeyendawo yonke. Ukukhula komfana, ubungani, kanye ne-kizuna (izibopho). Ngicabanga ukuthi izinto ezibalulekile kulula ukuzitholela ukuzwelana nokudlulisa.
3. Lesi isikhathi sakho sesibili uqondisa nge-studio MAPPA kusukela eGaro -Vanishing Line- ngo-2017. Ngabe ungakhuluma kancane ngalokho obukade ukwenzile ngaphambi kokusayina ukuqondisa i-The God of High School?
Ngemuva kuka 'Garo,' ngisebenze ekuvuleni [ukulandelana] kwe- 'Zombieland Saga.' Ngemuva kwalokho, ngenkathi ngisebenza ku- 'Banana Fish' njengomsizi womqondisi, ngazilungiselela ngokuqinile i- 'THE GOD OF HIGH SCHOOL' ngemihlangano yeskripthi kanye nokubekwa ezindabeni.
Ngamafuphi, 'ngijabule kakhulu.'
4. Uneqembu elixubekile nabasebenzi baseJapan, baseKorea, baseMelika njll. Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kunikeza umbukiso isikhalazo samazwe omhlaba? Futhi ubuzwe ngamunye bumi kanjani / bengeza kanjani embukisweni?
Izwe ngalinye linemvelaphi ehlukile yamasiko - UNKULUNKULU WESIKOLO ESIPHAKATHI isuselwe eKorea, kepha bekungahloselwe ukuqasha umqondisi waseKorea.
ingabe umshini onjengawe uhlangabezana nokwesaba
Kodwa-ke ngangena njengomKorea, futhi ngikholwa ukuthi lokhu kusisebenzele kahle ukuze siqonde kangcono umsebenzi wokuqala.
Mayelana nokuphakanyiswa, i-trailer yenzelwe i-U.S. Isihloko sibizwa ngesiKorea.
Ngicabanga ukuthi lokhu [okwenziwa kwasendaweni] kwenza umqondo omkhulu ngokwanda komhlaba.
Ngokuya ngobuhle balesi sihloko, i-anime eyenziwe yi-MAPPA, eyaziwa emhlabeni wonke ngemisebenzi yayo esezingeni eliphakeme, ayidumazi abalandeli abaningi.
5. Ngabe unomlingiswa omthandayo kuNkulunkulu wesikole samabanga aphezulu noma kukhona umlingiswa oyedwa othanda izimfanelo zakhe ngokukhethekile?
Uma ungicelile ukuthi ngiqambe igama elilodwa, kuzoba yiJegal.
Ngikholwa ukuthi isihloko sizokwengeza ukujula okwengeziwe ukuthi ngingaveza yini umphikisi ngendlela (yokubandakanya / ekhangayo).
Ukuze ngenze kanjalo, ngazama ukufana nomphikisi, uJegal. Hhayi ukumsola ngokubi kuphela, ngazama ukuchaza kahle kwiskripthi ukuthi kungani eba yilokho ayikho endabeni.
Ukusebenza kwezwi labalingisi kwangenza ngamthanda nakakhulu.
UKenjiro Tsuda nguyena odlala indawo kaJegal ngesiJapane, ngakho-ke uma ubungabuka lo mdlalo ngomsindo wokuqala waseJapan, uzokwazi ukubona ukuheha komlingiswa.
ngibukeka kanjani sithandwa anime
6. Unomsebenzi ohloniphekile njenge-animator, uhluke kanjani ekungeneni ezicathulweni zomqondisi futhi ucabanga ukuthi ulwazi lwakho njenge-animator oyinhloko lusiza?
I-animator yenza konke kusukela ekuhlelweni, futhi siphinde sibe ngumlingisi nomthwebuli wezithombe.
Mayelana nokwengamela isigcawu esisodwa, bekuyisikhundla esangivumela ukuthi ngithole zonke izici zomsebenzi kubandakanya ubuciko kanye nokuhlelwa, njengoba besingasho ngokusebenza bukhoma.
Ngemuva kokuba ngibe ngumqondisi, ngicabanga ukuthi ulwazi lwami njenge-animator lungisebenzele kahle ngomqondo wokuthi ngikwazi ukwengamela umsebenzi wonkana kusuka kule mibono.
7. Ziyini izinselelo ekukhetheni ubuciko bempi ye-anime?
Kafushane nje, lokhu kusho ukuthi kufanele sidwebe okuningi.
Uma ungadwebi okuningi, awukwazi ukukuhambisa, futhi awukwazi ukukulwisa. Ngakho-ke ungacabanga ukuthi kungaba yisigcawu esilula, kepha senze umsebenzi omningi onzima endaweni yesehlakalo sempi esiqeshini sokuqala.
Ngingathanda uma ungakunaka.
8. Ngabe usebenza ngokubambisana nezazi zokulwa? Futhi inqubo isebenza kanjani?
Angizange ngisebenze nesazi sobuciko bempi. Othisha bami bayizincwadi ne-YouTube.
9. Ngabe kukhona noma yisiphi isiyalo sokulwa okunzima kakhulu ukusenza sisebenze?
Kulesi sihloko, I-Taekkyeon kwakunzima ukudweba. Ukuhlaselwa okuyinqaba okuvela ezinyathelweni ezihlukile, ezihluke ngisho naseTaekwondo.
Sibe nomqondisi wezenzo ezibukhoma ojoyina nathi futhi wacela abalingisi bezenzo ukuthi babuye bakwenze kabusha.
Noma kunjalo, bekunzima kangangoba ngacabanga ukuthi besingenza kangcono. Ngicabanga ukuthi kunzima ukudweba ubuciko bempi obudume kakhulu, njenge-judo.
10. Ngabe unolwazi oluthile lobuciko bempi?
Ngeshwa, ngangingenalo ulwazi lobuciko bokulwa, ngakho-ke ngakufunda ezincwadini naku-YouTube.
Nginakekele ukwabelana ngezithombe ebenginazo nethimba lami ngokunamathisela izixhumanisi ze-YouTube njengesethenjwa ngokungeziwe kulokho okuyalelwe kubhodi yezindaba.
Eqenjini lami, uphrojusa uKubo-san, osebenze nami kusukela esiqeshini sokuqala se- 'Garo,' bekunguye kuphela ongumdlali oqinisekisiwe we-karate, judo kanye ne-kendo.
Ngezwa ukuthi uHidetaka Tenjin, owayedlala indawo kaRyohu, unguthisha weTaekwondo.
11. Ubuke i-anime ikhula?
Ngibuke i-anime kakhulu. (ehleka)
12. Uma kunjalo, yimiphi imibukiso oyikhonzile?
Lapho ngiseyingane, i-anime engangiyithanda kakhulu kwakungu- “Dragon Warrior.” Kwakuyisihloko esithandwa kakhulu eKorea.
Empeleni, bekuyisinye sezizathu esenza ukuthi kamuva ngikhethe ukujoyina iStudio Comet.
ucezu oluphezulu lwempilo eyishumi
13. Ungene kanjani kulo mkhakha?
Ngishaqekile ngokubuka i- “Macross: Do You Remember Love,” ngathuthela eJapan ngangena eChiyoda Institute of Technology and Art.
Ngemuva kokuphothula iziqu, ngijoyine iStudio Comet.
Okuhlobene: Umhlahlandlela Wokugcina Wokusiza Ungene Emkhakheni We-Anime
14. Yisiphi iseluleko esibaluleke kunazo zonke owasinikwa ngenkathi uqala?
Ngenkathi ngiphethe umdwebo wokuqala, umeluleki wami wangitshela, “Cabanga ngomenzi we-animator njengomlingisi.” Ngokubuka okujwayelekile, abantu bangacabanga ukuthi abalingisi bezwi kuphela abadlala izindima zomlingisi.
Kepha ngaphambi kwalokho, i-animator idlala indima njengomlingisi oyinhloko ngaleyo ndlela kufanele sibeke imizwa yabo kumlingisi bese wenza ukwenza umlingiswa adlale.
Ngahlabeka umxhwele kakhulu, futhi le mfundiso ibilokhu iyingxenye ebalulekile yalokhu engiyikho namuhla.
15. Yimaphi amafilimu / imibukiso ye-TV / abalingisi abakukhuthazayo?
othandekayo ku-franxx gurren lagann
Kunama-movie amaningi kakhulu, kepha i- “The Dark Knight” iyona efika engqondweni yami uma uthi “the best.”
Ziningi kakhulu engizithandayo, njengeMarvel works, kepha iyi- “The Dark Knight” ngomqondo wokuthi iyavuselela futhi iyafundisa.
Ngokuqondene nabalingisi, ngingathi uSong Gang-ho. Muva nje, udlale indima ephambili ku 'Parasite.'
16. Ungachaza kancane ngokuthi yini eyenza lawo mafilimu / imibukiso ye-TV / abalingisi bakukhuthaze kangaka?
Ibhayisikobho ethi “The Dark Knight,” imane “yashintsha indlela esethula ngayo amaqhawe ethu.”
Ngempela bekuyifilimu enhle kwaze kwaba sekugcineni. Nginesiqiniseko sokuthi iningi lenu liyazi kahle le filimu, kodwa uma ningazi ngayo, ngiyanikhuthaza ukuba niyibuke.
Ngokuqondene noSong Gang-ho, abalingisi engibathanda kakhulu, kumayelana nekhono lakhe lokulingisa ngokwemvelo elidlula 'ukudlala indima.'
Akathathi noma iyiphi indima naye njengomlingiswa wethoni, kepha uyakufakazela ukuthi kube khona.
Noma ngabe yiziphi izindima azenzayo, ubushelelezi futhi akukho lutho olungokwemvelo.
17. Uzizwa kanjani ngeqiniso lokuthi i-anime iya ngokuya iba banzi kakhulu futhi ibukwa emhlabeni wonke ngenxa yamapulatifomu afana neCrunchyroll?
Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle kakhulu!
Njengomdali, ngifuna abantu abaningi babuke futhi bazi isihloko, ngakho-ke akuyona enye into ngaphandle kokufiselekayo.
18. Lapho abantu ongabazi bethola ngomsebenzi wakho, yimuphi umbuzo abavame ukuwubuza?
Babuza ukuthi ngingene kanjani kulo mkhakha (ehleka).
19. Uma ungasebenzanga ku-anime, ubuzokwenzenjani esikhundleni salokho?
Ngokushesha, “isihambi.” Ngihambahamba emhlabeni wonke futhi ngibhala amabhulogi ukwaba (ukuheha / ubuhle / izinto ezinhle) zohambo lwami.
Ngalowo mqondo, ngingahle ngigaxelwe esigabeni se-blogger, kepha kimi, kuzoba 'isihambi.'
20. Noma yikuphi ukuphawula kokugcina kubalandeli njengoba bejabulela i-The God of High School?
Sichitha isikhathi esiningi sihlela futhi silungiselela lesi sihloko. Noma ungazi umsebenzi wokuqala, noma ngabe awunantshisekelo kuwo, ngithanda ukuthi uzame umbukiso okungenani kanye.
Uma uthola ithuba lokubuka lo mdlalo ngesiJapane, sicela wenze njalo.
Abalingisi bezwi balingane ngokuphelele.
Ingxoxo ye-Q & A NangoMgqibelo AM Magazine (Umshicileli Wama-Divers Ahlukahlukene)
I-Crunchyroll Manje Inezihloko Ezingaphezu Kwama-1000 + ze-Anime Ngeziqephu ezingama-30,000 +
i-anime enkulu kunazo zonke
ama-animes ayishumi aphezulu sonke isikhathi
luyini ucezu lwe-anime yempilo